अष्ट्रेलियामा विद्यार्थी कस्तो आवासमा बस्ने ? - Himalayan Kangaroo
अष्ट्रेलियामा विद्यार्थी कस्तो आवासमा बस्ने ?
Posted by Himalayan Kangaroo | ३ पुष २०७४, सोमबार ०३:०४ |
मेलबर्न । अष्ट्रेलिया अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले आफ्नो सुविधा अनुसार आवास छनोट गर्न पाउँछन् । ती आवासका फाइदा र वेफाइदा आ आफ्नै छन् । कलेजको होस्टेलदेखि होमस्टेमा समेत बस्न पाउने व्यवस्था छ ।
अष्ट्रेलियन कलेजहरुले आफ्नै होस्टेल पनि सञ्चालन गरेका हुन्छन् । ती होस्टेलहरु सुविधा सम्पन्न हुन्छन् । जसको सेवा शुल्क फरक फरक रहेको छ । आफैंले भाडामा लिएर बस्दा बढी शुल्क लाग्न सक्छ,तर सुविधा भने पक्कै बढी पाइन्छ ।
अष्ट्रेलियामा विद्यार्थीहरु समेत होमस्टेमा बस्न पाउने व्यवस्था छ । त्यहाँको परम्परा रीतिरिवाज अर्थात संस्कृति बुझ्न चाहनेकालागि होमस्टे फाइदाजनक हुन्छ । होमस्टेमा बस्दा तुलनात्मक रुपमा महँगो पर्न सक्छ । साताको एक सयदेखि दुई सय ७० डलरसम्म खर्च हुन्छ ।
जो विद्यार्थी बढी सुरक्षा चाहन्छ,उनीहरुकालागि अपार्टमेन्ट पनि उपर्युक्त हुनसक्छ । अष्ट्रेलियामा विश्वविद्यालय,कलेजभित्र वा नजिकै अपार्टमेन्ट बनाइएको हुन्छ । विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर बनाइएका त्यस्ता अपार्टमेन्ट सुरक्षित आवासकालागि उपर्युक्त हुन्छ ।
अन्तराष्र्टिय विद्यार्थीको बसाइकालागि गेष्ट हाउस पनि उपर्युक्त हुन सक्छ । विद्यार्थीले आफ्नो आर्थिक अवस्था र आवश्यकता अनुसारको सुविधा लिन सक्छन् । विद्यार्थीलाई आफैं खाना पकाएर खाने सुविधा पनि हुन्छ । गेष्ट हाउसमा किचन,बाथरुम पनि शेयर गर्न मिल्ने गरी बनाइएको हुन्छ । त्यसकालागि साताको ८० देखि १३५ अष्ट्रेलियन शुल्क लाग्न सक्छ ।
साथीहरुसँग मिलेर बस्ने
नेपाली विद्यार्थी जो कम खर्च गर्न चाहन्छन् उनीहरुकालागि घर भाडामा लिने र सार्थीहरु मिलेर बस्नु उपर्युक्त हुन्छ । भाडाका घरहरु सस्तोमा पाइन्छ । ती घरहरु भाडामा लिएर शेयर गर्न सकिन्छ । ती कोठा अथवा फ्ल्याट कति लिने त्यस अनुसार शुल्क लाग्छ । यो तुलनात्मक रुपमा सस्तो पर्छ ।
अष्ट्रेलियामा छात्रवासको व्यवस्था रहेको छ । विद्यार्थीलाई लक्षित गरी छात्रवासहरु बनाइएका हुन्छन् । विश्वविद्यालय वा कलेज छेउमा बनाइएका तयस्ता छात्रवासको प्रतिहप्ता ८० देखि २५० डलरको हाराहारीमा शुल्क लाग्छ ।
-हिमालयन कंगारु करियर डेस्क
Previousजहाँ शवलाई आगो सल्काई मलामी घर फर्कन्छन्
Next‘म विग्रिनलाई अष्ट्रेलिया आएकी होइन’
अष्ट्रेलियामा शताब्दीकै शक्तिशाली बाढी,२० हजार घर परिवार प्रभावित
२३ माघ २०७५, बुधबार ०१:३९
गमला फुटेर हैरान हुनुहुन्छ ? यसरी पुनः प्रयोग गर्नुहोस्
२ भाद्र २०७१, सोमबार २०:४४